Xildhibaannada Baarlamaanka ee kasoo jeeda Goboladda Waqooyi oo taageeray Guddiyada doorashada – Kalfadhi
Xildhibaannada Baarlamaanka ee kasoo jeeda Goboladda Waqooyi oo taageeray Guddiyada doorashada
Xildhibaannada labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda Goboladda Waqooyi, ayaa maanta magaalada Mogadishu uga qeyb-galay kulan wada-tashi ah oo lagu taageerayay arrimaha doorashooyinka xildhibaannada Goboladda Waqooyi ee Somalia.
Shirka wada-taashiga waxaa sidoo kale ka qeyb-galay Ra’iisul wasaare ku-xigeen Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, wasiiro, salaadiin, siyaasiyiin, musharraxiin, haween iyo dhallinyaro.
Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabid Xaashi, ayaa bishii hore aad u dhaliilay magacaabida Guddiyada maamulaya doorashada Xildhibaannada Goboladda Waqooyi, waxaana uu sheegay in Xukuumadda aysan kala tashan siyaasiyiinta iyo xildhibaannada Gobolada Waqooyi.
Dhammaantoodna xubnaha shirka ka qeyb-galay maanta ayaa si wadajir ah u taageeray guddiyada doorashada ee hadda magacaaban.
Guddoomiyaha Gudiga Baarlamaanka ee Dastuurka oo sheegay arrimo siyaasadeed in uu u xanibanyahay Dastuurka